यी हुन घु'स लिँदैगर्दा रङ्गेहात अख्तियारको फ'न्दामा परेका प्रहरीका असई ! - Sidha News
यी हुन घु’स लिँदैगर्दा रङ्गेहात अख्तियारको फ’न्दामा परेका प्रहरीका असई !
काठमाडौं। घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रहरी नायब निरीक्षकलाई कार्यकक्षबाटै प’क्राउ गरेको छ । आज अख्तियारको टोलीले महानगरीय प्रहरी वृत बौद्ध मातहत रहेको प्रहरी कार्यालय थलीका प्रमुख बिपिनचन्द्र पन्तलाई सेवाग्राहीबाट पाँच हजार घुस रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले रङ्गेहात प’क्राउ गरको हो ।
थलीका स्थानीय व्यवसायीलाई बिना कारण पटक–पटक दुःख दिने गरेको र रकम माग गर्ने गरेको भन्दै स्थानीयवासीले अख्तियारमा उ’जुरी दिएका थिए । प’क्राउ परेका पन्तलाई अख्तियारको टोलीले हि’रासत पठाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
हालै मात्र बौद्धको प्रहरी प्रमुखका रुपमा आएका प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशबहादुर सिंह महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा कार्यरत हुदाँ रु तीन लाख घुस रकम लिँदै गर्दा प’क्राउ परेका थिए । केही समय निलम्बनमा रहेर उनले सफाइ पाएपछि पुनः सेवामा आएका हुन् । यसअघि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम राई एक लाख ४० हजार घुससहित कार्यकक्षबाटै अख्तियारको टोलीले प’क्राउ गरेको थियो । हाल राई निलम्बनमै छन् ।